Miyaa suurtagal ah in dib looga soo celiyo Twitter?
Si loo horumariyo ganacsigaaga internetka waa qeyb ka mid ah dagaalka. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto goobtaada muuqaalka kumbuyuutarrada raadinta iyo dabcan macaamiisha suurtagalka ah. Nasiib wanaag, naqshadaynta mashiinka raadinta waxay u shaqeysaa ujeedadaas. Gaar ahaan khadka tooska ah ayaa kaa caawin kara inaad hagaajisid wacyigaaga caanka ah iyo inaad soo jiidatid socodka joogtada ah ee gaadiidka bogagga boggaga. Si aad u hesho natiijooyinka TOP ee Google, waxyaabaha kale ee aad u baahan tahay farabadan oo tayo sare leh oo ka socda goobaha PR sida Google+, Facebook, Twitter, iyo kuwo kale. Calaamadaha ka yimid boggaga internetka ee sareeya ayaa muujinaya Google sida caansan ee boggagaagu yahay. Twitter waa mid caan ah, sumcad badan, iyo bogga bulshada ee PageRank oo sareeya oo ku siin kara boggaaga leh cabitaano badan oo tayo leh. Halkan waxaad ku abuuri kartaa waxyaabo badan oo tayo sare leh oo aanad bixin karin boqolkiiba. Waxkasta oo aad u baahan tahay waa inaad ku sameysatid tweet ribo, backlinks backlinks in aad domain ee ku jira, iyo haddii ay macquul tahay dhowr ah.
Qodobkan, waxaan ka wada hadli doonaa sida loo helo faahfaahin dheeraad ah sidii dib loogu soo celin lahaa boggaaga Twitter. Rajada, macluumaadkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad hagaajiso darajooyinkaaga boggaaga iyo inaad soo jiidato macaamiisha aad u badan.
Sidee loo adeegsan karaa boggaaga Twitter-ka?
Twitter waa barnaamij bulsheed oo caan ah oo u oggolaanaya abuurista dib u celin. Waxay bixisaa laba meelood oo ku jirta boggaaga si aad ugu darto bogga internetka. Midka ugu horeeya waa goobta asaasiga ah ee asaasiga ah, kan labaadna wuxuu ku dhex jiraa 160 xaraf oo Bio ka mid ah. Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli kartaa xiriirinta goobaha macluumaadka ka jiidaya astaanta Twitter. Ilaha shabakadda ee macluumaadka ka hela Twitter waxaa ka mid ah Twellow, Klout, TwitterCounter, Twitaholic, iyo Favstar.
Haddii aadan weli xisaab ka helin ilaha websaydhka, samee boggagaaga Twitter ama wax ka beddel si aad u dhex geliso bogagaaga labada bog iyo bio. Intaa waxaa dheer, weydii macaamiishaada inay sameeyaan isla sidaas.
Waxaa jira dhowr arrimood oo aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso dhisidda isku-xirnaanta Twitter. Ugu horreyntii, xaddiga ugu weyn ee xiriirada aad ka heli kartid boggan bulsheed waa mid nofollow ah. Waxay micnaheedu tahay in aysan u gudbin gaadiidkaaga goobtaada. Si kastaba ha noqotee, xiriirada nofollow ee ka socda goobta PR weli wali qiimo weyn ku leh goobtaada iyo tus makiinadaha raadinta ee in aad u qalantaa darajada ugu sarreysa ee bogga natiijada raadinta. Waxyaabaha kale ee ay tahay inaad ka ogaatid dhismaha isku-xirka ee Twitter waa in dhamaan isku xirnaanta halkan ay u muuqdaan inay yihiin URL cad oo ka soo horjeeda xiriirinta ereyga muhiimka ah ee qoraalka. Taasi waa sababta aad u baahan tahay si aad u hubiso in URL-kaaga la akhrisan karo, la nadiifin karo.
Gali xisaabtaada twitter-ka iyo tweet xiriiriyahaaga
Waxaad isticmaali kartaa Qaar ka mid ah qoraalka madadaalada iyo madadaalada, ma aha oo kaliya xiriir. Sida ugu dhakhsaha badan ee fariintaada loo soo diro, macluumaadkaan waxaa loo heli doonaa taageerayaashaada.
Waa muhiim in la isticmaalo hashtags ka hor eray kasta oo muhiim ah oo aad rabto darajo SERP sida dadka isticmaala raadinta Twitter fulinta ishtags. By habka, waxaad sidoo kale aad u awood u yeelan kartaa links.
Ka dhig kuwa raacsan retweet-kaaga tweets
Your tweets waa in ay soo qabtaan, witty iyo xitaa qallafin si ay u sameeyaan dadka isticmaali retweet ay iyaga u gaar ah. Haddii aad dareensantahay in aadan haysan karti farsamooyinka farsamooyinka qoraalka ah, ka dibna weydii asxaabtaada si aad u riixdid xiriiriyaha tweet-ka.
Ku soco TweetMeme
TweetMeme waa shabakad web site ah oo raadinaya oo retweets tweets ugu xiisaha badan. Sidaas awgeed ujeedadaada ugu muhiimsan waa inaad ka muuqatid boggaga boggaan, abuurista farriin la aqbali karo Source .